Chien Chung Wei sy ireo loko mandoko azy dia mampatsiahy ny kilasika | Famoronana an-tserasera
Watercolor dia manana fahaizana manokana hahafehy azy ary izany dia mahay mampiasa amin'ny refy mifanaraka amin'ny gouache Azonao atao ny manamboatra karazana grady sy haitao isan-karazany izay manome atmosfera manokana, toy ny sary hosodoko Chien Chung Wei.
Chung Wei masters dia gouache amin'ny fomba tena tsara ary hita amin'ny sary hosodoko tsirairay avy izany. Loko tsara kalitao izay mitarika antsika mankamin'ireo làlana Taiwans sy ny tanàna eny an-tanàna. Mpanao hosodoko iray izay nanana loko volom-borona sy fitadiavam-bola lehibe tamin'ny zava-kanton'ny zavakanto sy ny fitsaboana tsara tarehy nataony tamin'ny takelaka tsirairay hitanao momba azy.
Ny loko mandoko an'i Chien Chung-Wei dia manangona ireo fanahy ary ny toetran'ny mpampianatra tandrefana ny loko rano tamin'ny taonjato roa lasa izay, izay nangonina tao amin'ny Bio-ny tao amin'ny tranonkalany. Tamin'ny faha-32 taonany, ny sangan'asany dia nanjary marefo sy kilasika kokoa, mampatsiahy ny an'i William Henry Hunt sy Myles Birket Foster.
Mamorona hatsaran-tarehy ambony miaraka amin'ny sanganasa tsirairay seho isan'andro afaka mivoaka ny tanàna tsirairay izahay. Mpanakanto Taiwaney iray manana fanomezana manokana ho an'ny fanajariana ny tany sy ny fitondrana anay alohan'ny sary hosodokany any amin'ilay tontolo azo tsofinaina raha toa ka mifantoka amin'ny antsipiriany ny olona.
Herinandro vitsivitsy izay mandray ny sangan'asan'ny mpanao hosodoko isan-karazany izahay izay manaraka ny kilasika ao mofomamy rosemaryao amin'ny menaky ny Tordesillas na ny mikasika ny vadin'i Maokun.
Ianao dia manana Facebook nataon'i Chung Wei sy ny tranonkalanao manokana hampifaly anao amin'ny sangan'asa kanto kokoa an'ny kalitao tsara watercolor an'ity mpanao hosodoko Taiwaney ity. Chuing Wei dia mitondra antsika amin'ny loko watercolor mahazatra sy tena tsara izay misy ny lanjan'ireo zava-dehibe sy manome antsika ny hatsaran'ny fiainana andavanandro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Tondra-drano ao amin'ny Landscapes an'i Chien Chung Wei